10 lalao TNA Wrestling lehibe indrindra - Wwe
Ny TNA, na Impact Wrestling araka ny ahafantaran'izy ireo, dia manana fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao. Raha ny marina dia sahirana be tato ho ato, na ny mpikomy miala amin'ny orinasa, ny fanapahan-kevitra ratsy na ny tsy fanatrehana orinasa, izay nahatonga ny orinasa iharan'ny tsikera maro. Saingy ankehitriny sy taloha dia nanana lisitra lisitra iray izy ireo izay nanome anay ny lalao sy fotoana lehibe indrindra nandritra izay 16 taona lasa izay.
Izany dia mitondra ahy amin'ity lisitr'ireo lalao 10 TopNA tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny TNA Impact Wrestling ity.
Filazana mendri-kaja: Kurt Angle vs. Jeff Jarrett - Genesis 2009, Kurt Angle vs. AJ Styles - Hard Justice 2008 & Genesis 2010, Kurt Angle vs. Jay Lethal - No Surrender 2007, Kurt Angle vs. Desmond Wolfe - Turning Point 2009, James Storm vs. Chris Harris - Sorona 2007, AJ Styels vs. Jerry Lynn vs. Low Ki - NWA: TNA PPV # 8, Bobby Roode vs. James Storm - voafatotra ho an'ny voninahitra 2012, Kurt Angle vs. Abyss - Turning Point 2008, Abyss vs. Sabu - Turning Point 2005, Austin Aries vs. Low Ki vs. Jack Evans vs Zema Ion - Destination X 2011 & The Motor City Machine Guns vs. Generation Me - Bound For Glory 2010.
ahoana no hahafantaranao raha ampiasaina ianao
# 10 Kurt Angle vs. Sting - voafatotra ho an'ny voninahitra 2007
Ny lalao nofinofy dia afaka miaina mifanaraka amin'ny hadalana
Kurt Angle vs. Sting dia lalao nofinofy izay tian'i WWE hamandrika, ary saika tamin'ny fotoana iray. WWE dia efa nifampiraharaha tamin'i Sting tamin'ny fiandohan'ny taona 2002 ary nino tamin'ny fotoana iray fa efa akaiky ny fifanarahana teo amin'ny roa tonta - tena akaiky tokoa, ka nahatonga ny tolona Sting Kurt Angle tao amin'ny WrestleMania X8 aza izy ireo.
ahoana no ahalalako raha tiako ny lehilahy
Na izany aza, tsy nisy velively ny fifanarahana ary niaraka tamin'i Kurt ho kintana WWE nandritra ny androm-piainany manontolo, nidina ny fanantenana ny lalao rehetra.
Ny taona 2006 dia lehibe ho an'ny TNA Wrestling, tsy hoe i Sting dia nivoaka tamin'ny fisotroan-dronono mba hitolona ho azy ireo, fa i Kurt Angle koa dia hisaraka amin'ny WWE ary hahita ny tenany miasa ho an'i Dixie Carter sy Jeff Jarrett.
Tonga dia nilalao ny drafitra ho an'ny Kurt Angle vs. Sting, saingy mila mailo momba izany ny TNA, ary izy ireo, amin'ny ankamaroan'ny. Na dia nizara ny peratra aza i Sting sy i Kurt tamin'ny fotoana roa nifanandrinana tamina lehilahy marobe, ny fihaonana voalohany nifanaovan'izy roa dia voatahiry ho an'ny hetsika lehibe indrindra nataon'ny TNA tamin'ny taona, Bound For Glory, tamin'ny 2007.
Ny fananganana hatramin'ny ady dia novonoina tsara ary rehefa vita izany rehetra izany, dia tavela tamin'ilay lalao tsara indrindra nataon'i Sting isika hatramin'ny faramparan'ny taona 90. Nanana izany fahatsapana ‘lalao lehibe’ izany ary tian'ny vahoaka izy, nilamina tsara ny zava-drehetra ary nampientam-po fotsiny tamin'ny ankapobeny. Nanindrona an'i Kurt i Sting mba hampiakatra ny fiadiana ny tompondaka eran-tany faharoa amin'ny TNA.
maninona ny vadiko no tezitra foana
zavatra mahafatifaty hatao ho an'ny sakaizanao
zavatra manokana hatao ho an'ny sakaizanao
ahoana ny fijanonana tsy hiteny be loatra
fomba ahoana no tsy ho tia ady atao amin'ny fifandraisana